शहरको एकीकृत विकास स्थानीय तहले मात्रै गर्न सक्दैनन्ः योजनाकार श्रेष्ठ जग्गा व्यवस्थापनका लागि ल्याण्ड बैंक चाहिन्छ
मनीषा अवस्थी आइतबार, माघ २६, २०७६ मा प्रकाशित
शहरी क्षेत्रमा जनसंख्या बृद्धिअनुसार व्यवस्थित गर्न नसक्दा अस्तव्यस्त बनिरहेको छ । खासगरी गाउँघरबाट शहरमा घरजग्गा किन्नेहरु बढिरहने तर सरकारले व्यवस्थित बसोबासको सुनिश्चितता गर्न नसक्दा शहर नै कुरुपतातिर धकिलिदैछ । शहरी क्षेत्रमा त झनै जग्गा खण्डिकरणका कारण शहरी क्षेत्रमा कृषियोग्य भुमी नै शून्यतिर उन्मुख छ । यही बढ्दो अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण यातायात, ढिलासुस्तीे, खुला क्षेत्रको अभाव, प्रदुषण बृद्धि, फोहारमैला व्यवस्थापन लगायतका कुरामा समस्या व्यहोर्नुपरेको छ । बालबालिका लागि खेल्ने तथा रिफ्रेसमेन्टका लागि ठाउँ नहुने हुँदा डिप्रेसन समेत बढिरहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाइरहेको छ । भुमी सुधार, व्यवस्थित शहरी विकास तथा व्यवस्थित नक्सालाई कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ सिनियर इञ्जिनियर तथा शहरी योजनाकार दीपक श्रेष्ठसँग इकोनोमिक पोष्टका लागि मनीषा अवस्थीले गरेको कुराकानी ।
नेपालको ‘फिजिकल डेभलपमेन्ट’को इतिहास के हो ?
नेपालको राजधानी काठमाडौं उपत्यकालाई सुन्दर शहर बनाउने योजनाहरु लामो समयदेखि बन्दै आएका छन् । दक्षिण एशियामै पहिलोपटक फिजिकल डेभलपमेन्ट प्लान भनेर १९६९ मा बनेको थियो । तर त्यो पुरानो भएको भनेर सरकारले कार्यान्वयन नै गरेन । त्यसपछि जग्गा व्यवस्थित भनेको शहर व्यवस्थित गर्नु हो भने जग्गा व्यवस्थित गर्ने योजना १९७० मा काठमाडौं उपत्यकालाई केन्द्रित गरेर योजना बन्यो । त्यसपछि फेरी ब्रिटिसको हेल्बेट फक्स भन्ने संस्थाले १९९० मा पनि अर्को डकुमेन्ट बन्यो ।
त्यसमा काठमाडौंमा यो चिज गर्नुपर्छ यति पैसा लाग्छ भनेर पुरै बिवरण छ । त्यसपछि ९० को दशकको अन्त्यतिर जापनिजहरुले काठमाडौं उपत्यकामा यातयात व्यवस्थापनका लागि भन्दै ट्रान्सपोटेसन मास्टर प्लान भनेर बनाइदिएको छ । त्यही अनुरुप अहिले विभिन्न नदीहरुमा कोरिडोरहरुको विकास भएको हो । त्यसपछि बसपार्क पनि थोरै व्यवस्थित भएको हो । त्यो योजनाले एउटा बसपार्क पूर्वतिरको पोइन्टका रुपमा कोटेश्वरमा चाहिन्छ र पश्चिमतिरका लागि कलंकीमा चाहिन्छ भनेर इंकित गरेको छ । त्यो पनि हुन सकेन । तर, कोरिडोर निर्माण बाटो चौडा गर्नेतिर भने त्यसपछि हाम्रो ध्यान गएको देखिएको छ । त्यसकारण हाम्रो फिजिकल डेबलपमेन्टको समस्या भनेको योजनाहरुलाई फलो नगर्नु नै हो ।
जब २०४५ सालमा भौतिक योजना मन्त्रालयको स्थापना भयो त्यतिखेर गाइडेड लाइन डेबलपमेन्ट (जिएलडी) भन्ने डिजाइन प्रणाली लागु भयो । त्यो बेला काठमाडौं र ललितपूरको शहरहरुमा सबै सडकको मापदण्ड तोकियो । नयाँ सडक बन्ने सम्भावना भएका ठाउँमा पनि त्यो मापदण्ड तोकियो । तर त्यसलाई फलो गरिएन । त्यो कुरा स्थानीय तहले गर्नुपथ्र्यो तर, लामो समय जनप्रतिनिधिबिहिन बनेका स्थानीय तहले ती कुरालाई बेवास्ता गरे । त्यो कस्तो भने, कित्ता नापीमा घरहरु गएको हुन्छ त्यहाँ हरेक ठाउँमा बाटो हुन्छ । त्यसले हरेक जग्गाधनीले बाटोका लागि जग्गा दिनुपर्ने भयो । यसको राम्रो पक्ष भनेको सबै घरमा पुग्ने बाटो बन्यो तर नराम्रो पक्ष भनेको चाहीँ बाटो व्यवस्थित नभइ नागबेलीजस्तो बन्यो । मान्छेलाई मन लागेको ठाउँमा बाटो चिरियो यसले शहरले रुप नै नराम्रो बनाइदियो ।
यो कुरा गर्दा मलाई प्रोफेसर रामेश्वर अधिकारीले ९० को दशकतिर लेखेको किताबको याद आयो । त्यसमा लेखिएको एउटा शब्द ‘बानेश्वराइजेशन’ थियो । यो भनेको के हो भने बानेश्वरमा त्यतिखेर गल्ली नै गल्लीको ठाउँ छ भन्ने थियो । अहिले पुरै उपत्यका त्यस्तै भएको छ ।
स्थानीय तहहरु खाली रहँदाको बेलामा पनि इन्टिग्रेट एक्सन प्लान बन्यो । यो समुदायको सहभागितामा विकासको कन्सेप्ट हो भने, अर्को पेरुडिक प्लान बन्यो । पेरुडिक प्लानको कुरा चाहीँ बहुदलीय व्यवस्था आएपछि स्वायत्त शासन ऐनमा राखिएको कुरा हो । त्यसले स्थानीय तहले पेरुडिक प्लान बनाएर आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्नुर्छ भन्ने थियो । त्यसबेला धेरै नगरपालिकाहरुले त्यो प्लान बनाए पनि तर जनप्रतिनिधिहरु भएनन् कर्मचारी छिटो सरुवा हुने भयो त्यसले गर्दा त्यस्ता प्लान पनि लागु भएनन् ।
काठमाडौंजस्ता शहरहरुमा घरहरु भरिसकेका छन् । अब यसलाई व्यवस्थित गर्ने माध्यम के हुन सक्ला ?
काठमाडौंजस्ता शहरहरुमा घरहरु भरिसकेका छन् । यसको कन्ट्रोल मेकानिजम भनेको नै ऐनमार्फत नै हो । अब योजनाले मात्रै काम गर्दैन । अहिले संबिधान धेरै कुराको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । नगरपालिकाले पनि स्ट्रिक गराउनुपर्छ । खासगरी जग्गा किनबेच र जग्गा खण्डिकरणलाई रोक्नुपर्छ । घर बनिसकेका ठाउँमा बाँकी नराम्रो हुनबाट रोक्ने बन्न बाँकी ठाउँमा एकीकृत बस्ती विकासको योजना लगिहाले भने थोरै हदसम्म बच्न सकिन्थ्यो होला ।
साइट एण्ड सर्भिस भन्ने कन्सेप्ट पनि थियो शहरी विकासको । यसले चाही सरकारले शहरी क्षेत्रबाट अली बाहिर जग्गा सस्तोमा किनेर कुनै एउटा समुदायलाई त्यो बेच्ने हो । यसले चाहीँ वास्तविक जग्गाधनी बिस्थापित हुनपर्ने भएको हुँदा पछि ल्याण्ड पुलिङ सिस्टममा जग्गाधनी संगै लाने हो । यसले केही जग्गा विकासमा खर्च गर्छ त्यसले उसको क्षेत्रको विकास हुन्छ ।
नेपालको शहरी विकासका लागि यति धेरै योजनाहरु बने कार्यान्वयन हुन नसक्या चाहीँ समय सान्दर्भिक नभएर कि अरु केही कारण होला?
हाम्रा योजनाहरु निकै राम्रा बनेका छन् । तर कार्यान्वयनमै समस्या छ । बनाउने त बनाउँछ धेरै मिहेनेत गरेर तर जसले लागु गर्नुपर्ने हो त्यसले गर्दैन । त्यस कारण अबको एउटा बाटो सबैको सहभागितामा योजना बन्नुपर्छ । त्यसपछि आफैले बनाएको योजना लागु गर्न त उसलाई सजिलो हुन्छ नि ।
उसोभए हाम्रा नीतिमै समस्या हो ?
योजना र नीति फरक नै कुरा हुन् । कुनैपनि योजना बनेपछि कार्यान्वयनका क्रममा नीति आवश्यक पर्छ । यो नीति चाहीँ हाम्रो योजनासँग मिल्दोजुल्दो नभएको हो । योजनाले धेरै काम बनेको छ त्यो काम गर्न नीतिले वर्षौं लगाइदिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको नै उदाहरण दिऔं । सानो भन्दा सानो काम गर्न पनि ६२ दिन लाग्छ अब यो अवस्थामा कार्यान्वयनमा ढिलाुस्ती त भयो नि । यसलाई समय सुहाउँदो र विकासमैत्री बनाउनुपर्छ ।
तपाइले भन्याजस्तो व्यवस्थित शहरका लागि जग्गाको कित्ताकाट र किनबेचलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । यसका लागि के गर्नुपर्ला?
हो व्यवस्थित शहरको प्रमुख कुरा नै जग्गा व्यवस्थित हो । यसका लागि सबैभन्दा सजिलो राम्रो र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचलित चाहीँ ल्याण्ड बैंक हो । यसले के गर्छ भने हरेक जग्गा किनबेचको रिर्पोटिङ अनिवार्य रुपमा ल्याण्ड बैंकमा हुनुपर्छ । विकसित देशहरुमा हाम्रोजस्तो तरिकाले किनबेच हुँदैन । यसले गर्दा सरकारले जग्गालाई मापदण्डभित्र रहेर व्यवस्थित रुपमा किनबेच गर्न गराउन पाउँछ ।
यस्तै कुरा जग्गा किनबेचले राजश्वमा छली हुँदैन, सबै पारदर्शी हुन्छ भने अर्को कुरा जग्गाको मूल्यमा मनोमानी हुँदैन । यसैगरी जग्गाको मूल्य यस्तो आकाशिदैन । अहिले पनि हेर्नुस् न सरकारले जग्गाको मूल्य एउटा निर्धारण गरेको छ बजारको किनबेच अर्कै छ । कसले कति जग्गा किनबेच गर्यो सरकारले थाहा पाउँछ त ? त्यसकारण सरकारले जग्गा व्यवस्थित ल्याण्ड बैंक बनाएर ल्याण्ड पुलिङलाई प्राथमिकता दिएर स्थानीय समुदायको सहभागितामा विकासलाई जोड दिनुपर्यो ।
एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रमको छोटकरी नाम ल्याण्डपुलिङ हो । यो विधिअनुसार कुनै ठाउँको जग्गालाई सबैभन्दा पहिले एकीकरण गर्ने काम गरिन्छ । एकीकरण गर्दा जग्गाधनीको सहमतिमा सबै जग्गाको एउटै कित्ता बनाउने गरिन्छ । यस विधिअनुसार सबैभन्दा पहिले स्थानीय उपभोक्ता मिलेर एउटा समिति गठन गर्नुपर्छ । उक्त समितिले उपभोक्ताको सहमतिमा सबैको लालपुर्जा एकीकृत गर्छ । सोहीअनु्सार इञ्जिनीयरहरुको सहयोगमा सम्बन्धित जग्गाको गुरुयोजना तयार गरिन्छ । यो निकै प्रभावकारी देखिएको छ ।
नयाँ संरचनाअनुसार व्यवस्थित शहरी विकासको नीति अझै फेर्नुपर्ने हुन्छ कि हुँदैन ?
हामी अहिले संघीय नेपालका पूर्वाधार निर्माणकै चरणमा छौं । निकै ध्यान दिएर योेजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ । योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्ने सके एउटा व्यवस्थित नेपाल बन्न पाँच वर्ष पर्याप्त हुन्छ । किनभने हामी पछाडि परेको एउटा मात्रै कारण हो, हाम्रा विभिन्न निकायबीच कोर्डिनेशन हुन नसक्नु हो ।
यो समस्या पहिल्यैदेखिको हो । जसका कारण हामीले समयअनुकुल आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेका छैनौं । हामीलाई बजेटको समस्या होइन इमान्दारिताको समस्या हो । अहिले विभिन्न दातृ निकायले नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छन् । त्यसको सही सदुयोग गर्ने वातावरण हामीले बनाउँदै पूर्वाधार निर्माण लाग्नुपर्छ । अहिले विकास निर्माणका क्रममा हामी जथाभावी काम गरिरहेका छौं । जहाँ पायो त्यही खनिरहेका छौं । जहिले मन लाग्यो खनिरहेका छौं । यसका लागि शहरी विकासका न्युनतम पूर्वाधारमा जिम्मेवार निकायबीच नै समन्वयात्मक नीति बन्नुपर्छ ।
अहिले केन्द्रकै विभिन्न निकायबीच समस्या देखिन्छ भने स्थानीय तह र प्रदेशसँगको समन्वयमा झनै समस्या देखिएको सत्य हो । शहरी विकासका लागि एकीकृत रुपमा काम गर्ने काठमाडौं विकास प्राधिकरण छ । यसलाई यहाँ महानगर तथा नगरपालिकाले मन पराउदैनन् । यसले पनि शहरी विकास समस्या देखिन्छ नि ।
आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि वीमा आवश्यक बुधबार, फागुन २१, २०७६
जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा प्रभावकारी भएनः कृष्ण प्रसाद आचार्य बुधबार, फागुन १४, २०७६
उद्योग क्षेत्र राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउँछु बुधबार, फागुन ७, २०७६